Owaduma kuZalo uthungatha ikhono
UTHANDEKA Zulu ekakwe wuSabelo Ngema noSergeant Malishe beKabawo Art Academy. Isithombe: FACEBOOK/SERGEANT
UMLINGISI owazakhela udumo ngokudlala indawo kaNombuso kuZalo, uThandeka Zulu, usevumbulula ikhono emacikweni asafufusa. Le ntokazi yenza lo msebenzi ngokubambisana nozakwabo enabo eqenjini le-Afro pop, i-Afro Soul, okunguSabelo Ngema noSergeant Malishe.
Uthe bazobe benzisa inhlolokhono yokugcina eDurban Music School, eThekwini, ngenhloso yokuthola amanye amaciko abencishwe ithuba phambilini ukuze aqeqeshwe esikhungweni sabo sezobuciko, iKabawo Art Academy.
“Sithe asenze inhlolokhono yokugcina ngoba sifuna ukunikeza abantu elinye ithuba. Eyangonyaka owedlule yayihanjelwe yinqwaba yabantu, okwenza kwaba nzima ukwemukela amaciko amaningi,” kusho uThandeka osenamava nolwazi kulo mkhakha wokulingisa.
Ube esenxusa abantu ukuba bafike kwinhlolokhono bezilungisele njengoba bazobe bengawubekezeleli umsebenzi osezingeni eliphansi.
“Sinxusa nabazali ukuba bavumele izingane ukuba zifeze amaphupho azo futhi bazisekele. “Siyafisa ukuhlangana nentsha enamakhono, ezibophezele ekuveleleni kule ndima yezokungcebeleka,” kusho uThandeka oseke wadlala emidlalweni eminingi.
Uphonsele inselelo intsha eneminyaka ephakathi kuka-16 no 35 ubudala ukuba ifike kusukela ngo-10 ekuseni kuze kushaye * -3 ntambama.
“Kasidingi ziqu kodwa sifuna abanekhono nokuzimisela.”
Unxuse noma wubani ofisa ukubamba iqhaza kule nhlolokhono ukuba abathinte ku-082 791 1050.